July 2019 | Pyithu Hluttaw
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ဆားဗီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Miodrag Nikolin အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ဝင်း ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်း မှ ဦးမျိုးအောင်ထွေး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Jul 29, 2019/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသူရထွန်းဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့အခြေစိုက် Earth System Co., Ltd မှ Southeast Asia Operation Director Mr. Chris Smithies နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ထွေးတို့ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အဖွဲ့- ADB (Asia Development Bank)အား